Thursday November 21, 2019 - 22:14:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
24-kii saac ee lasoo dhaafay ayay qaar badan oo kamid ah warbaahinta Soomaalida waxay faafinayeen warar ay ku sheegayaan in ciidamada maamulka 'Jubbaland' ay qabsadeen deegaanno dhaca duleedka magaalada Kismaayo.
Maamulka Axmed Madoobe ayaa baraha Internetka ku faafiyay sawirrada ciidamo wata gaadiidka Tiknikada oo ku sugan dhul baadiye ah oo ay ku sheegayaan in uu yahay deegaanka Kaam jaroon ee Jubbada Hoose.
Baaritaan ay sameysay SomaliMeMo ayay ku ogaatay in aysan jirin wararka ay sheeganayeen mas'uuliyiinta maamulka Kismaayo ee ah in ay qabsadeen deegaanka Kaam Jaroon.
Xiriiro aan la samaynay mas'uuliyiin katirsan wilaayaa Islaamiga Jubbooyinka iyo dadka deegaanka ayaan ku ogaanay in wax dagaal ah uusan ka dhicin deegaanka Jaam Jaroon islamarkaana wali lagu maamulayo shareecada islaamka.
"Deegaanka Kaam Jaroon nabad iyo barwaaqo ayaa kajirta waa been wararka ay warbaahintu sheegtay oo ah in ay qabsadeen ciidamada Axmed Madoobe, magaalada waxaa kajira maamul islaami ah wax dhib iyo shidda ahna ka majiraan" sidaas waxaa yiri qof ku sugan deegaan Kaam Jaroon.
Maamulka isku magacaabay 'Jubbaland' oo khilaafka kala dhaxeeya dowladda Farmaajo uu ka dhigay mid go'doon ah ayaa hadda isku dayaya in uu adeegsado dacaayad uu ku sheeganayo guulo aan jirin.
Maleeshiyaadka Axmed Madoobe ayaa sawirrada ay faafiyeen isagasoo qaaday agagaarka garoonka diyaaradaha Kismaayo balse xaqiiqda ayaa ah in wax dhaqaaq ah aysan usameyn dhanka Kaam Jaroon oo ah deegaan ay ka taliso wilaayada Islaamiga Jubbooyinka.